Ogaden News Agency (ONA) – Hay’ada FOA oo Kadigtay Xaalada Shacabka Ogadenia.
Hay’ada FOA oo Kadigtay Xaalada Shacabka Ogadenia.
Posted by Dulmane	/ September 30, 2017
Hay’ada beeraha iyo cunada aduunka ee FOA ayaa digniin kasoo saartay xaalada qalafsan ee shacabka kudhaqan wadanka gacanta Gumaysiga Itoobiya kujira ee Ogadenia, warbixin dheer oo ay soo saartay hay’ada FOA ayaa lagu sheegay in shacabka ree Ogadenia ay kujiraan xili adag oo abaaro iyo cuduro ay isugu darmadeen.
Hay’ada cunada iyo beeraha aduunka ee FOA ayaa dowladaha deeqaha bixiya ugu baaqay in ay dadka ree Ogadenia lasoo gaadhaan cuno dag dag ah, waxayna hay’adu sheegtay in ay dadka shacabka ah ee Ogadenia kudhaqan 42% hayso macaluul daran.
Hay’ada ayaa sheegtay in dadka xoolo dhaqatada ah ee ree Ogadenia ay xoolihii kadhamaadeen kadib markii xili roobeedkii lasoo dhaafay lawaayay roobkii lasugayay, waxayna hay’adu sheegtay in biyo iyo baad la’aan ay xooluhu udhamaadeen.
Qaramada midoobay ayaa warbixin ay dhawaan soo saareen kusheegay in ay Ogadenia kudhinteen inkabadan 2 milyan oo xoolo ah kadib abaartii lixaadka lahayd ee wadanka kuhabsatay, waxaana warbixinta qaramada midoobay lagu sheegay in dadka ree Ogadenia aysan helin kaalmo bini’aadam nimo oo micno leh.
Sidoo kale Qaramada Midoobay ayaa sheegay in gudaha wadanka lagumaysto ee Ogadenia ay kubarakaceen in kabadan 1 malyan oo shacab ah kuwaas oo kasoo barakacay dhulka miyiga ah waxayna dadkaasu soobarakaceen kadib markii xoolihii ay dhaafeen.
Xukuumada Gumaysiga Itoobiya ayaa dhankeeda mashquul ku ah dagaalo ay kula jirto shucuubta kala duwan ee ay gumaysato iyo waliba boobka hantida shacabka, iyagoo sidoo kale mashquul ku ah gadashada hub xad dhaaf ah.